अनमोल भर्जिन को प्रतिमा "चिकित्सा"
खाद्य र पेय पदार्थ
कला र मनोरंजन
समाचार र समाज
घर र परिवार
खेल र फिटनेस
बौद्धिक विकास, ख्रीष्टियन
तपाईं Iisus Hristos र परमेश्वरको पवित्र आमा निको पार्ने चमत्कार, र यो दिन कि सुन्नुभएको छ? कसरी? जवाफ एकदम सरल छ। आफ्नो मार्फत पवित्र अनुहारहरू, र रोग को iznemozhdayuschih आफ्नो धेरै वर्ष देखि मद्दत तिनीहरूलाई को फ्याँकिन् गरेका धेरै मान्छे, यो पुष्टि हुन्छ। यी चमत्कारी उपायहरु एउटा उदाहरण जीवनदायी दिनुभयो र विगतमा सय वर्षसम्म बिरामी मान्छे गम्भीर मद्दत गर्छ जसले "चिकित्सा", एक आइकन छ। सकारात्मक ऊर्जा र अनन्त स्वर्गीय सास बोक्न यो धेरै बहुमूल्य प्रतिमा हाम्रो लेख समर्पित हुनेछ।
लेखन प्रतीक को समय
परमेश्वरको आमा "द चिकित्सा" को प्रतिमा पुरानो र एक पवित्र को holiest अनुहारहरू। यो समय मा चतुर्थ शताब्दीमा Georgia को enlightener थियो जो सेन्ट नीना, को दिन मा लेखिएको थियो। भण्डारण र रिकभरी लागि आशा गुमाएका गर्ने मानिसहरूलाई आए जो Kartalinia मा Tselihanskom मन्दिरमा "चिकित्सा", पढ्नुहोस्।
दुर्भाग्यवश, चतुर्थ शताब्दीको प्रतिमा साँचो छवि, गर्नुपर्छ धेरै लामो समय भएको सुरक्षित गर्न सकिएन यो। तसर्थ, भन्न गाह्रो छ जोरजियन मूल मा चित्रण गरिएको थियो कुरा बुझ्न। सायद परमेश्वरको आमा दुःखकष्ट मानिस भन्दा झुकेको छ, उहाँलाई प्रस्तुत भएको थियो, कुनै पनि अवस्थामा, कुनै एक सक्छन् बताउनुहोस्। तर अझै पनि यो दिन म परमेश्वर हुनुहुन्छ जो लेट XVIII रूस मा प्रसिद्ध भए मात्र "चिकित्सा", को चमत्कारी अनुहारहरू एक पुगेको छ। यसको मूल को इतिहास, र हामी तल भन्नेछु।
चमत्कारी ढंगमा प्रतिमा को लेखन को एक संक्षिप्त इतिहास
यो पवित्र घटना XVIII सताब्दी को अन्त मा मास्को मा भयो साँच्चै छ। त्यतिबेला त्यहाँ भिन्सेन्ट Bulveninsky नामको bogosluzhitel बस्थे। यो मानिस एक विश्वासीले र मानिसको सेन्ट मरियम को एक वास्तविक भक्त तिनलाई विशेषता एउटा असामान्य बानी थियो। त्यसैले, बित्तिकै उनले चर्चका आए वा बाहिर, त्यसपछि परमेश्वरको पवित्र आमा को छवि अघि उनको घुँडा गर्न तुरुन्तै गिर र एउटै शब्दहरू रूपमा: "जय, Marie! प्रभु तपाईं संग छ! अनमोल जो ख्रीष्ट र उहाँलाई खुवाउनुभएको, हाम्रो मुक्तिदाता को छाती जन्माई गर्भमा आफ्नो, छ! "।
केही समय पछि, भिन्सेन्ट आफ्नो जिब्रो कालो गरिएका जो देखि नश्वर रोग overcame र दुखाइ उहाँलाई पागल चलाए भनेर बलियो थियो। bogosluzhitel आफूलाई आए एक पटक, त्यो तुरुन्त बिना एक पल गरेको निको लागि उनलाई सोधेर, पवित्र भर्जिन र प्रभुको प्रार्थना पढ्न थाले। एक दिन, भिन्सेन्ट दुखाइ को अर्को आक्रमण पछि फेरि जीवन आएका थिए पछि, त्यो भर्जिन मरियमलाई प्रार्थना गर्न थाले, र स्वर्गीय स्वर्गदूतहरूको धेरै reminiscent थियो जो आफ्नो छाँयामा, को ओछ्यानमा टाउको उभिरहेको देखे। Vikenty साथ सँगै नव आगन्तुक प्रार्थना र परमेश्वरको आमा कराउन थाले। पछि त्यहाँ एक inexplicable चमत्कार थियो - परमेश्वरको पवित्र आमा, पूर्ण प्रकाश घेरिएको छ, यो उहाँलाई र निको भिन्सेन्ट देखियो।
पूर्ण स्वस्थ रहेको, मानिस, चर्च गए आफ्नो घुँडा गर्न गिर र प्रार्थना गर्न थाले। वरपरका bogosluzhiteli, आफ्नो आँखा विश्वास Vikenty पीडादायी मृत्यु छाया किनभने। "यो कसरी भयो?" - आफ्नो वरपरको सोधे। सबै अरूलाई पनि प्रार्थना र बाँच्न र प्रभुको देशमा हिंड्न मौका लागि परमेश्वरको सबैभन्दा पवित्र आमा धन्यवाद दिन आए भन्दा मानिस तिनीहरूलाई सम्पूर्ण सत्य बताए।
यो चमत्कारी निको लेखन यस दिन लगभग सबै अस्पताल चर्च र chapels सजाउनु प्रतिहरू जो प्रतीक "चिकित्सा", कारण थियो।
यो कथा परमेश्वरको सेन्ट द्वारा लेखिएको थियो जो "ऊन Oroshonnoe" भनिने पुस्तक, वर्णन थियो Dmitriy Rostovsky।
जहाँ क्षणमा यो पवित्र अंकित राखिएको छ?
केवल 18 औं शताब्दीमा प्रतिमा "चिकित्सा" रूस मा महिमा गरिएको छ। हरेक दिन, मसीहीहरूको हजारौं उनको सहायता अपिल गर्ने र बस प्रार्थना आएका छन्। र सबै भन्दा कठिन परिस्थितिमा, रिकभरी लागि अनुरोध संग उनको आउनुभएका मान्छे, निको थिए।
यो Alekseevskogo को क्षेत्र मा मास्को मा "चिकित्सा" को पहिलो प्रतिमा भण्डारण गर्दछ आश्रममा। नेपोलियन गरेको शत्रु grenadiers को आक्रमण समयमा विहारको नष्ट गरे। लगभग गिर्जाघर चर्च बाहेक सबै भवनहरु, तल जलाए। सबै चर्च सम्पत्ति, प्रतीक सहित जमीन मुनि गाडे थिए। को pits भन्दा पवित्र मग्दलिनी बिरामी संग ओछ्यानमा राखे। को मालिकहरू संक्रमित हुन डर, उहाँलाई भेट्नुपर्छ गर्न डराएका थिए, त्यसैले सबै shrines बाँचे छन्। शत्रुलाई मास्को बाँकी भएपछि विहारको चाँडै बरामद।
को XIX सताब्दी मा।, को 30 सेकेन्ड मा, यो मन्दिरको साइटमा ठाडो निर्णय थियो ख्रीष्ट मुक्तिदाताको। यस सन्दर्भमा मा, विहार अर्को स्थानमा सार्न थियो लाल गाउँ (माथिल्लो Krasnoselskaya सडक)। 1926 मा, Bolsheviks तोडफोड अन्तर्गत सबै चर्च बर्बाद थिए र नयाँ Alexius विहारको मारा जब, त्यसैले प्रतिमा "चिकित्सा" Sokolniki मा स्थित छ जो पुनरुत्थानको चर्च, सारिएको थियो। पवित्र अंकित र अझै पनि त्यहाँ भण्डारण गरिएका।
को भर्जिन प्रतीक को निको शक्ति
चमत्कारी ढंगमा प्रतिमा को रिकभरी एउटा उदाहरण कि 1962 मा भयो घटना रूपमा सेवा गरे। एक केटी, पुजारी को छोरीले मेरुदण्ड एक जाती नहुने रोग देखि बिरामी परे। तर, आशा गुमेको छैन, त्यो, उनको बुबा संग, त्यो पवित्र अंकित प्रार्थना गरे, र अन्तमा निको भएको थियो।
प्रतिमा के हो?
परमेश्वरले "द चिकित्सा" को आमा को प्रतिमा धेरै analogues छ। तर, पवित्र मरियम Leakey को लिखित प्रतिलिपि बाबजुद अझै पनि शक्ति निको छन्। परमेश्वरको आमा चमक रोगी भिन्सेन्ट को बेड सामना शो रूपमा मूल।
आई Tomac 1889 मा आफ्नो पुस्तक "द पुरातात्विक र ऐतिहासिक विवरण Aleksei विहार" मा पवित्र अंकित को उपस्थिति वर्णन गरे। प्रतिमा को क्रस-खण्डहरू मा उनको समर्थन गर्न देखिन्थ्यो जो परमेश्वरको Archangels, प्रतिनिधित्व। गब्रिएल, बाँया मा - - माइकल दाँया मा। 27 सेमी बुलेटिन सुन र तामचीनी सजावट संग सजाया चाँदी triptych मा समावेश - यो आकार मा सानो, उचाइ मा, को बारे मा 32 सेमी र चौडाई छ।। को chasuble मा हीरे र अन्य उत्तिकै सुन्दर पत्थर को धेरै छ। ओढ्ने भर्जिन हिउँ-सेतो मोती संग strewn। प्रतिमा आफैले गिर्जाघर समर्थन गर्ने पत्थर खाँबो सम्मिलित छ। पत्थर र अगाडि Lika को निर्माण सिढी दुवै पक्षलाई उनको अगाडि9lompad बाल्न।
"चिकित्सा" प्रतिमा। के मद्दत गर्छ?
यसलाई हामी नै एक प्रतिमा, र यसलाई प्रतिनिधित्व छ जो एक दिन किनभने लामो कुनै पनि प्रतिमा अघि विशेष मान यसलाई शुद्ध हृदय र राम्रो मनसाय आउँछ, विशेष गरी यदि त्यहाँ प्रार्थना गर्न भनेर, स्वीकार गरिएको छ।
त्यहाँ उनले परमेश्वरको आमा सपना aching थियो र एक प्रार्थना पछि अनुहार अगाडि प्रतिमा यो पठाउँछ जसमा धेरै अवस्थामा छन्। यसको निर्देशन जाँदै तुरुन्तै निको पार्नुभयो।
माथि उल्लेख रूपमा, हाम्रो लेडी को सम्मान अनुहारहरू धेरै सिर्जना, तर यो "चिकित्सा" को प्रतिमा छ कि ती चमत्कार, प्रार्थना जो अघि धेरै आशाहीन बिरामीले कुनै तर्क प्रतिक्रिया थिएन मदत गरे। प्रार्थना पवित्र अंकित अक्सर आफ्नो रोगबाट आशाहीन निको हुन चाहनुहुन्छ अघि, offender सजाय, छिटो र पीडारहित प्रसब लागि सोध्न, र स्तन-फिड शिशुहरू को संभावना बारे प्रार्थना।
पवित्र अंकित समर्पित मन्दिरको इतिहास,
प्रतिमा "चिकित्सा" को मन्दिर मास्को मा Kashira राजमार्ग मा क्लिनिकल मनोरोग चिकित्सा को संस्थान मा 1922 मा बनाइएको थियो। मन्दिरमा लागि कोठा अनुसन्धान संस्थान आवश्यकताहरूको मूल डिजाइन भएको थियो जो XX सताब्दी को 80s, फिर्ता बनाइएको थियो। निर्माण लागि रकम कर्मचारीहरु र संस्थान को नेतृत्व संकलित थिए। कुनै पनि समयमा, कठिन जीवन परिस्थितिमा भएका मानिसहरूलाई फिर्ता आउन र पवित्र भर्जिन लागि प्रार्थना गर्न सक्छौं।
पवित्र मरियम कसरी प्रार्थना गर्न निको हुन?
परमेश्वरको आमा "द चिकित्सा" को प्रतिमा धेरै नितान्त बिरामी मान्छे राम्रो प्राप्त मदत गरेको छ, तर सबै सुने गर्न सक्षम थिए। कारण के हो? सामना गरौं।
3 बाट 27 - तपाईं वा तपाईंको प्रेम एक गम्भीर रोग भने, यसलाई, 40 दिन को लामो प्रार्थना पाठ्यक्रम पूरा गर्न फोक्सो रोगबाट लागि आवश्यक छ।
तपाईं विदेशी बोल्ने तरिका, साथै आफ्नो हृदय हुक्म पढ्नुहोस्।
तपाईं प्रार्थना आलस्य overcomes पढ्न भने, त्यसैले आफैलाई सँगै पुल र सहयोगको लागि पुकारा जारी, रोग प्रतिरोधी त्यसपछि chastises। यो एक धेरै महत्वपूर्ण विन्दु हो।
पढ्न भनेर वाक्यांश र शब्द पालना भने प्रार्थना मामला मा प्रभावी हुनेछ, व्यक्ति सोच्न, जसको लागि पढाइ र पढ्न अर्थ बुझ्न प्रयास।
कम्तिमा एक पटक एक महिना वा एक हप्ता प्रार्थना छैन, यो गर्न मद्दत गर्नेछ। परमेश्वरको आमा अपिल हरेक दिन हुनुपर्छ।
अन्यथा तपाईं सुन्न भनेर एक मौका छ, छैन कम 15 भन्दा मिनेट प्रार्थना पढ्नुहोस्।
आध्यात्मिक र फैाजी स्थितिहरू पालना गर्नुहोस्।
प्रार्थना पढेपछि जरूरी भर्जिन धन्यवाद।
माथि उल्लेख गरिएझैं प्रतिमा "Tselitenitsa" धेरै को ज्यान सुरक्षित गरियो। एक कठिन क्षण मा मुख्य कुरा के तपाईं परमेश्वरको विश्वास गुमाउन लागि, र कुनै पनि मामला मा हृदय गुमाउन छैन। मानवता को मुख्य कर्तव्य छ - प्रार्थना, रो, आशा र तपाईंले सुन्नुभयो गर्न निश्चित हो, यो कुनै आश्चर्य Iisus Hristos सधैं विरामीहरु उपचार गर्न भने छ।
जब ओल्गा जन्मदिन पार्टी? कुन दिन ओल्गा चर्च पात्रोको नाम दिन celebrates?
चर्चमा व्यवहार कसरी केही सुझावहरू
परिवर्तनको विहार, मूर: इतिहास र फोटो
मह स्पा: यो एक छुट्टी, र के परम्परा कस्तो सम्बन्धित
मनाउन कसरी कहिले र एलियाको दिन नाम?
देश को आकर्षण: Miass शहर - पवित्र त्रिएक चर्च
सिरेमिक प्रशंसक heaters: समीक्षाहरू, मूल्यहरू, फोटोहरू
तरकारी, ओवन मा सुखा - स्वादिष्ट र स्वस्थ
Periscope (आवेदन): यो के हो, हामी किन आवश्यक र कसरी प्रयोग गर्ने गर्छन्
यो मनोरञ्जन केन्द्र "Kasargi" चेल्याबिन्स्क क्षेत्रका - फोटो र समीक्षा
कोरलिँदै अन्डा: आवश्यकताहरु, विशेषताहरु, भण्डारण
इनडोर प्रकाश को लागि एलईडी लैंप: विशेषताहरु, प्रकारहरु, विशेषताहरु
Hepatic fritters र एउटै विषयमा अन्य भेरिएसनहरूमा
Hermogenes कुलपिता। मास्को को कुलपिता र सबै रूस Hermogenes
प्रमुख जनरल - जो को शीर्षक कमाएको हुनुपर्छ
2012: युरोपेली फुटबल च्याम्पियनशिप। रोचक तथ्य
गालापागोस पेन्गुइन: वासस्थानमा, भोजन, रोचक तथ्य
Copyright © 2018 ne.birmiss.com. Theme powered by WordPress.